Senator Raage: “Madaxda Dalka iyaga ayaa qaraabta” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Senator Raage: “Madaxda Dalka iyaga ayaa qaraabta”
Senator Raage: “Madaxda Dalka iyaga ayaa qaraabta”
Doodii Golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalka Soomaaliya waxay Senatada ka hadleen waxyaabaha keenay in khilaafka u dhaxeeya madaxda Dowladda iyo Dowlad Goboleedyada.
Senatarada ayaa ku kala aragti duwan khilaafka iyo waxyaabaha dhaliyey, Senator Maxamed Xuseen Raage oo kamid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa sheegay in madaxda Dowladda ay qaraabtaan si lamid ah sida ay u qaraabtaan kuwa Dowlad Goboleedyada.
Senaterka ayaa Tusaale u soo qaatay Lacag Gaareysa Dowladda Qatar 50-Milyan laga soo qaaday, xukuumaddane ay dalka keentay 10-Milyan, waxa uuna taa ku sheegay in aysan jirin Cid la xisaabtanto Xukuumadda, sababne u noqotay in madaxda Dowlad goboleedyada iyane qaraabtaan.
Senator Maxamed Xuseen Raage ayaa golaha aqalka sare ka dalbaday in ay dib u eegaan heshiisyada Xukuumadda ee Dowladaha Carabta maadaama Dhaqaale ay kusoo helaan, aanan jirin cid kala xisaabtanto Dhaqaalahaasi.
Ugu dambeyn waxa uu soo jeediyey in la helo Heshiis iyo Is aaminaad u dhaxeysa Dowladda federaalka iyo Dowlad Goboleedyada si loogu gudbo is qab-qabsiga ka dhaxeeya sida uu hadalka u dhigay.